Iphupha malunga nokugonywa Discover ➡️ Ukufumanisa kwi-Intanethi ▷ ➡️
Iphupha malunga nokugonywa. Umntu ebesoloko ezama ukuqonda intsingiselo yamaphupha; Kuqala kwakucingwa ukuba bangoothixo abazama ukunxibelelana nomntu; kodwa namhlanje yabelwe into engaphezulu kwengqondo. Ukwazi intsingiselo yamaphupha kunokunceda, ukuba unomdla wokufunda.
Ugonyo (igama lobugcisa: ugonyo) lelinye lawona manyathelo aqhelekileyo okukhusela kwizifo ezinokuthintelwa. Kwizifo ezininzi, abafundi benza ugonyo oluninzi ezikolweni okanye ezibhedlele ngexesha lobhubhane; Nangona kunjalo, uninzi lwezitofu zokugonya zinikwa ngugqirha eselusana okanye njengomntwana. Oku kubandakanya imasisi, uqwilikana, i-hepatitis B, kunye ne-tetanus, phakathi kwabanye.
Izilwanyana zihlala zigonywa, zombini izilwanyana zasekhaya kunye nezasefama okanye izilwanyana zasendle kumyezo wezilwanyana. Umzekelo, uya kufumana i-rotavirus okanye i-rabies vaccins. Nokuba ngumntu okanye isilwanyana: idosi nganye kufuneka ibhalwe kwisitifiketi sokugonya.
Nangona ukugonya sele kuphumelele kakhulu, kuhlala kuxoxwa ngako, kwaye kukho abameli kunye nabachasi. Xa ubhubhane wecorona waqhambukayo ngo-2020 ngenxa yokusasazeka okukhawulezileyo kwintsholongwane ye-SARS-CoV-2, ebangela isifo se-COVID-19, iyeza elitsha elisandula ukwenziwa ngamanye amaxesha lenza ukungathembani kubemi: kwelinye icala, akukho datha kunye nezifundo zexesha elide zazifumaneka ngokulandelelana okunokwenzeka kunye nobungakanani bokusebenza kwezinto. Kwelinye icala, ukuphela kobhubhane kunye nezithintelo ezinxulumene noko zazingabonakali ngaphandle kogonyo oluninzi.
Isigqibo sokuthintela okanye sokuthintela isitofu sokugonya, ukukhusela, isibonelelo kunye nomngcipheko, ke ngoko kunzima kubantu abaninzi kwaye sinokubagcina behlala ixesha elide, nkqu nasemaphupheni abo.
Ukuqonda iphupha malunga nolawulo lwesitofu sokugonya, kubalulekile ukuba ukhumbule iinkcukacha ezininzi zephupha kangangoko kunokwenzeka, uhlalutye isimboli nganye yephupha emva koko ubeke konke ukutolikwa ngokomxholo kunye nomnye. Mhlawumbi ungasikhumbula isifo owawugonywe kuso? Lwalwenziwa phi ugonyo, kwi-ofisi kagqirha, esibhedlele, okanye kwiziko lokugonya elikhulu?
1 Uphawu lwephupha «ugonyo» - ukutolikwa ngokubanzi
2 Uphawu lwephupha «ugonyo» - ukutolikwa kwengqondo
3 Uphawu lwephupha «ugonyo» - ukutolika kokomoya
Uphawu lwephupha «ugonyo» - ukutolikwa ngokubanzi
Ngokubanzi, uphawu lokuphupha "ugonyo" lunokubonwa, kwelinye icala, njenge uphawu olunxulumene nomzimba itolikwe. Oko kukuthi, umphuphi ujongene nogonyo okanye ngoku ujongene nemicimbi ejikeleze isifo kunye nokhuseleko oluhambelanayo. Isenokuba sisifo sokugonya umkhuhlane okanye i-corona virus. Ngokukodwa, izitofu zokugonya, ezithathwa njengezintsha kwaye ke zingavavanywa kakubi, zinokubangela amaphupha anjalo.
Kwelinye icala, ukugonya ephupheni kunokuchazwa njengophawu xa uphupha ukuba ujolise kakhulu kwingcinga yakho esengqiqweni nakwakho ukuqonda Kuya kufuneka umamele, ngakumbi ukuba unika umntu uthando ngakumbi kwaye uyamthemba kunokuba kufanelekile.
Ukuba umntu oleleyo ujonga indlela abantwana abancinci abagonywe ngayo ephupheni ukukhusela kwimasisi, irhashalala, ukukhohlela okanye ezinye izifo zobuntwana, uphawu luyibonisa ngokokuchazwa kwephupha ukuba ngumntu ongenamandla okanye ongenakuzikhusela uhlaselo lwangaphandle luzamile ukukhusela. Impumelelo ixhomekeke ekuphenduleni kwabantwana abaphuphayo: ukuba baphile qete kwaye basempilweni emva kokugonywa, umntu oleleyo angamkhusela ngokukhuselekileyo umntu ochaphazelekayo ngokwenyani.
Ukuba iphupha ngokwalo liza kugonywa ephupheni kwaye lifumane ixesha loku, ayikhathali nokuba ichasene nengqakaqha, uqwilikana okanye irubella njl. Ngapha koko, uphawu lwephupha lukwabonisa kule meko ukuba ungangena engxakini kuba ubambeka kakhulu kumtsalane wobufazi.
Ukuba imalunga ne-coronavirus kunye nesifo se-COVID-19, ekugonyelwa kuso ukuphupha kugonyo lwakho, khumbula ixesha elinzima. Ngaphandle kwako konke ukuzincama kunye nelahleko, la mava abalulekile kubomi bexesha elizayo balo mntu kuthethwa ngaye. Ke ngoko, isimo sengqondo esifanelekileyo kwiinkumbulo ezimbi senza ingqiqo enkulu.
Ukuba iphupha eli lijonga indlela abanye abantu abagonywe ngayo ephupheni, mhlawumbi kumaziko okugonya ngexesha lokugonywa kwabantu abaninzi, uphawu lwephupha "ugonyo" apha lumfuzisela ukuba womelele.
Ugonywe ngempumelelo, ukhuselekile kwaye ukhuselekile kwizifo kwi el mundo yamaphupha abonisa ngokufuziselayo ukuba kungakho inguquko yokwenene ebomini balowo uleleyo. Kuyamangalisa ukuba ulindelo olubi luye lube lolulungileyo, iziphumo ezivuyisayo ngeenxa zonke. Le ndlela yokutolika isebenza kokubini xa umntu ophuphayo egonyiwe kwindawo yokuphupha, naxa abanye abantu befumana iyeza lokhuselo.
Ngokwenyani, nabani na ofumana ifoto ngesitofu sokuthintela emathangeni okanye ezinqeni kufuneka alumke angachukumisi mntu. Iinjongo ezimbi. Ukuba indawo yokuhlatywa iyadumba emva kogonyo, kunokuba neziphumo kumntu oleleyo ezingathandekiyo.
Ukufumana idosi yokugonya kwingalo ephezulu kubonisa ukungakwazi ukwenza njengephupha. Umntu ekuthethwa ngaye uziva engenamandla kwaye ukhetha ukuhlala elumkile kunokuba aqokelele amandla kwaye azame ukwenza.
Uphawu lwephupha «ugonyo» - ukutolikwa kwengqondo
Kutoliko lwengqondo ngephupha, inoculation ephupheni ngokubhekisele kokungazi njenge umlinganiso we ukhuseleko itolikwe. Oku kubuhlungu ekuqaleni, njengokufuziselwa kwenaliti yesirinji, kodwa emva koko kujike kube ngamava aluncedo.
Ukuba iphupha ngoku ligonyiwe kumava ephupha, oku kukhankanya ukutolikwa kwengqondo yephupha njengelona- mhlawumbi linemvakalelo- ukwenzakala ngomnye umntu. Nangona kunjalo, ekugqibeleni, la mava aya kuba luncedo kwaye afundise amaphupha.
Isimboli yamaphupha "gonyo", kodwa ikwaqulathe nesiphakamiso sokuba iphupha liyakhawuleza kwaye kulula ukuchukumisa abanye kwaye lithathe uluvo lwendawo engqongileyo. Ukuphupha ngokungazi uzama ukuba uxhathise iimpembelelo zangaphandle ngokufaka iphupha.
Ukuba uphupha woyika isifo, kodwa nokugonywa ephupheni, le meko yephupha ikubonisa ukuba uyazikhusela ekuvukeni ubomi ngokuchasene nento enokuba luncedo kuwe. Izitofu zokugonya ezinje nge-AstraZeneca, ezazisetyenziselwa ukulwa ubhubhane we-corona, zibonisa ukukhathazeka komntu ophuphayo malunga nokuncama imeko ekhuselekileyo kwaye ukumelana nayo. akuqinisekanga kufuneka ujongane nayo.
Ukuba umntu oleleyo ugonyela omnye umntu ephupheni lakhe, oku kuyambonisa ukuba ufuna ukunyanzelisa ukuthanda kwakhe kunye nemibono yakhe kwabanye ephupheni. Ukuba ngequbuliso ubonakala njengogqirha ugqoke idyasi emhlophe okanye uyinxalenye yabasebenzi abongikazi kwaye ukhupha iisirinji zokugonya, uyasebenza ngokungaphaya kwamandla akho kunye nokuzicingela.
Uphawu lwephupha «ugonyo» - ukutolika kokomoya
Ukutolikwa kwamaphupha okomoya kubeka uphawu lwephupha "ugonyo" njengemibono. Impembelelo kwinqanaba lokomoya. Ukuba umphuphi ufumana iarhente yokugonya kwisehlo sephupha, uyachaphazeleka kwaye alathiswe ngaphandle kwinkolelo yakhe.